तमलोपाले खाता खोल्यो
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उम्मेदवार दिलीपकुमार पाण्डेय विजयी भएका छन्।
एउटाको मतले अर्कै उम्मेदवार विजयी !
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–२ मा एक उम्मेदवारको मतले अर्कै उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
काठमाडौंमा बालेन र सुनिताको फराकिलो अग्रता‚ कसको कति मत? काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) की उम्मेदवार सुनिता डंगोलले अग्रता कायमै राखेका छन्। बालेन ६ हजार ३२४ र सुनिता नौ हजार २९० मतले अगाडि छन्।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा गठबन्धन विजयी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको मेयरका उम्मेदवार तीर्थराज भट्टराई र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमेयरका उम्मेदवार विसन राई विजयी भएका हुन्।
एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको गृहनगरमा कांग्रेस विजयी नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको गृहनगर इलाम नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले मेयर र उपमेयर दुवै पदमा विजय हासिल गरेको छ।
मध्यपुरथिमिको मेयरमा कांग्रेस, उपमेयरमा माओवादी केन्द्र विजयी भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनतर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठ विजयी भएका छन्।
झापाको हल्दिबारीमा राप्रपाका रवीन्द्र लिङ्देन निर्वाचित झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का रवीन्द्र लिङ्देन पुनर्निर्वाचित भएका छन्।
भरतपुरमा मतान्तर बढाउँदै रेणु दाहाल‚ कसको कति मत? चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की रेणु दाहालले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छन्।
तिलोत्तमाको मतगणना पुनः शुरू रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणना पुनः शुरू भएको छ। मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विरोध जनाएपछि मतगणना रोकिएको थियो।
जुनीचाँदेमा गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले विजयी जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का वेदबहादुर शाही विजयी भएका छन्।
खोटेहाङ गाउँपालिकामा गठबन्धन विजयी
खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
तेह्रथुमको लालीगुराँसमा माबुहाङ पुनर्निर्वाचित
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुनकुमार माबुहाङ पुनर्निर्वाचित भएका छन्।
गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष वडा सदस्यमै पराजित सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत वडा सदस्यमै पराजित भएका छन्।
घोराहीमा एमालेका नरुलाल ३ हजार मतले अगाडि दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्।
दिप्रुङ चुइचुम्मामा एमाले विजयी खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ। अध्यक्षमा एमालेका लोकेन्द्र राई र उपाध्यक्षमा अरुणा थापा मगर विजयी भएका हुन्।
बालेनको १०२४१ मत, स्थापित र सिंहले कति पाए? काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र (बालेन) साहले दश हजार मत कटाएका छन्।
ललितपुरको महाँकालमा कांग्रेस विजयी ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गणेश केसी विजयी भएका छन्। उपाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की डोल्मामाया गोले विजयी भएकी छिन्।
पोखरामा मतान्तर बढाउँदै गठबन्धनका उम्मेदवार पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवार धनराज आचार्यले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्।
भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता कायमै‚ पछ्याउँदै विजय सुवेदी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनकी उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) की रेणु दाहाल र नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजय सुवेदीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ।
रावाबेंसीको अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
कास्कीको अन्नपूर्णमा एमाले विजयी कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विजयी भएका छन्।